FANABEAZANA MAMPIATY :: An-jatony monja ireo ankizy manana fahasembanana tafiditra an-tsekoly • AoRaha
FANABEAZANA MAMPIATY An-jatony monja ireo ankizy manana fahasembanana tafiditra an-tsekoly
Mbola ambany ny tahan’ ny zaza manana faha-sembanana tafiditra mianatra eny amin’ireo sekoly iraisana. Vitsy ihany koa no manaraka fampianarana amin’ny sekoly tsotra.
“Miisa telo amby roapolo sy dimanjato ireo ankizy manana fahasembanana any amin’ireo sekoly enina amby dimampolo miara-miasa aminay. Misy ankizy eo amin’ny folo isaky ny sekoly any amin’ireo sekoly mampiaty ireo. Raha miohatra amin’ny isan’ny ankizy izay tokony hiditra an-tsekoly eto Madagasikara dia tena mbola tsinontsinona izany tarehimarika izany”, hoy Rafenomiadana Mbolamamy, mitantana ny tetikasa Mahay fanabeazana Mampiaty eo anivon’ny FJKM.
Vitsy ny sekoly manaiky handray azy ireny ary tsy resy lahatra hampianatra ny zanany manam-pahasembanana ny ray aman-dreny sasany. Eninjato mahery ny isan’ny sekoly FJKM manerana an’
i Madagasikara. Eo amin’ny fito amby roapolo no miara- miasa amin’izy ireo amin’ izao fotoana izao. Nisy ny fampiofanana sy fampitaovana ireo sekoly mandray an-tanana ireo ankizy manana fahasembanana ireo.
“Niezaka nanome fitaovana an’ireny sekoly ireny izahay ho an’ny mpampianatra sy ho an’ny ankizy mba ho fanampiana sy fanamorana ny fampidirana azy any an-tsekoly. Nisy ny fanomezana fanampiana mba hanatsarana ny fotodrafitrasan’ny sekoly satria tsy voatery mety amin’ny filàn’ireo ankizy ireo”, araka ny fanampim-panazavana.
Tanjony hatramin’ny taona 2020 ny hanabeazana ankizy manana faha-sembanana miisa dimampolo sy roanjato ankoatra ireo dimanjato mahery efa tafiditra an-tsekoly. Manomana herinandro ho an’ny fanabeazana Mampiaty ny foibe fitondran-tsekoly FJKM, ny 3 hatramin’ny 8 desambra ho avy izao ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny olona manana faha-sembanana. Hetsika fanentanana sy fanabeazana maro no atao amin’ireo sekoly enina amby dimampolo hanatanterahana ny tetikasa. Faritra efatra no isian’izany dia ny Faritra Analamanga, Vakinankaratra sy Atsinanana ary Moramanga ka tohanan’ny Fikambanana kristianina any ivelany mirotsaka amin’ny asa sôsialy maro na CBM.